Mogadishu Journal » 2018 » March » 13
Madaxweynaha Soomaaliland oo u anbabaxay Imaaraadka
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa safar aan hore loo shaacin maanta ugu kicitamay dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Biixi, oo aan saxaafadda la hadal markii uu dhoofiyay, ayaa waxa safarkaasi ku wehelinayay shan wasiir oo kala ah, wasiirrada...
Trump oo xilka ka qaaday xoghayihiisii arrimaha dibedda
Mjournal :-Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay Xoghayihiisii Arrimaha Dibadda, Rex Tillerson, isagoo ku beddelay agaasimaha hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA, Mike Pompeo. Madaxweyne Trump ayaa eryidda Tillerson iyo magacaabista Pompeo ku shaaciyay...
Baarlamaanka Somaliland oo ka jawaabay Go’aankii Golaha Shacabka ee DP World
Mjournal :-Xildhibaanada maamulka Somaliland ayaa maanta yeeshay kulan ay uga jawaabayeen go’aankii Shalay kasoo baxay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee ku saabsanaa heshiiskii shirkadda DP World la gashay Somaliland. Kulanka Xildhibaanada waxaa shir godoominayay...
Mjournal :-Hoggaanka Socdaalka iyo Jinsiyadda dowladda federalka Soomaaliya ah ayaa xafiiska ugu balaaran ee gobolada ka hirgeliyay Magaaladda Garowe ee Xarunta Maamulka Puntland. Xaruntan cusub ee Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Laanta Garowe ayaa noqon doonta xaruntii ugu...
Mjournal :-Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Gobolka Jubbada hoose, ciidamada Jubbaland ayaa weerar qorsheysan waxa ay ku qaadeen degaanka Wirkooy ee duleedka Magaalada Kismaayo. Wirkooy ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan Ururka Al Shabaab, ciidanka weerarkan...
Mjournal :-Afhayeenka Wasaaradda Amniga dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan oo warbaahinta kula Magaalada Muqdisho ayaa digniin culus u diray Ganacsatadda Soomaaliyeed oo uu sheegay in qaarkood ay lacag siiyaan Al-Shabaab. Waxaa uu sheegay in Ganacsatadda garoomada...
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda Kalluumaysiga ee Dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cali Xaashi, ayaa ka hadlay shir ku saabsan Kalluumaysiga Soomaaliya oo ka socda Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya. Wasiirka ayaa sheegay in kulankani oo ay ka qayb galayaan qaar ka...
Mjournal :-Soomaalida xabsiga la dhigay oo tiradooda ay gaareyso 17 Qof ayaa waxaa laga qab qabtay xaafadaha ku yaalla degmada Nasri City oo ah meel si weyn Soomaalida ay u degan yihiin. Sida ay xaqiijiyeen jaaliyadda Soomaalida ah ee ku nool magaalada Qaahira Ciidamada amniga oo...
Jose Mourinho Oo Fariin U Diray Real Madrid
Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa uga digay Real Madrid inay waqti isaga lumiyaan saxiixa goolhaye David de Gea. Saxafiyiin Isbaanish ah ayaa Mourinho weydiiyay xaalada goolhayaha lala xiriirinayo Real Madrid ka hor kulanka Champions League caawa ay ku...
Aqalka Sare oo maanta ka doodaya Xeerkii dalka looga mamnuucay Shirkadda DP World
Mjournal :-Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankooda 1aad ee Kalfadhiga 3aad, kaasoo ay uga doodayaan dhowr ajande oo uu ka mid yahay Xeerkii shalay ay meel mariyeen Golaha Shacabka. Xeerkan oo loogu magac daray Dhowrida Gobonimada...
Dagaal dhex-maray ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab by Ahmed Cali - Fri Jan 18th 16:18:49
Qatar oo ka guuleysatay Sacuudi Carabiya by Ahmed Cali - Fri Jan 18th 14:25:28
Al-shabaab : waxaan dilnay 53 askari by Ahmed Cali - Fri Jan 18th 14:17:29
Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la yeeshay Madaxweyne ku xigeenka Puntland by Ahmed Cali - Fri Jan 18th 6:03:27
Koonfur Galbeed oo xoog kusoo furaneysa dad ay Afduubteen Shabaab by Ahmed Cali - Fri Jan 18th 6:00:21